Tarisa kana MacBook yako ichitsigira kuvhura uchishandisa Apple Watch | Ndinobva mac
Tarisa kana yako MacBook inotsigira kuvhura kuburikidza neApple Watch
Chokwadi isu tese tatoziva mukana wekuvhura MacBook yedu kuburikidza neApple Watch, asi havasi vese maMac anotsigira chiitiko ichi ndosaka nhasi tichaona nzira yakapusa kuona kuti Mac yedu inoenderana neiri basa.
Zviripachena kuti zvinofanirwa kupfeka iyo Apple Watch panguva yekuvhura uye zvinofanirwa kutaurwa kuti zvakateedzana zvezvinodiwa zvinodiwa kuti iyi sarudzo iwanikwe. Chimwe chinhu chakakosha chinotiziviswa nevashandisi vazhinji ndechekuti izvi hazvishande kwavari nekuda kwekusimbisa-nhanho mbiri uye zvakajairika, nekuti kuti zviitwe chinhu chakakosha chinodiwa yedu Apple ID inoshandisa zviviri-chinhu chechokwadi pachinzvimbo chechipiri-nhanho yekusimbisa.
Uye zvakare, kekutanga nguva patino vhura iyo michina kana tangove nebasa rinoshanda, zvichave zvakakodzera kuwedzera password yedu. Ipapo hazvizove zvakakosha kuti utaure zvekare kunze kwekunge tadzima michina, uyezve icharatidza chiziviso chekuti tinofanirwa kuisa password kamwe.
Chero zvazvingaitika, kana iwe usina chokwadi kana Mac yako ichitsigira Auto Unlock tichishandisa Apple Watch, zvese zvatinofanirwa kuita ndezve bata pasi Sarudzo kiyi paunenge uchisarudza Apple menyu> Ruzivo rweSystem. Kana tangopinda mukati mehwindo tinosarudza Wi-Fi mudivi repashure tobva tatsvaga sarudzo "Kuvhura otomatiki: Inoenderana" kurudyi kwaro. Ipapo zvinonyatsotiratidza kana michina yedu ichienderana nesarudzo iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Tarisa kana yako MacBook inotsigira kuvhura kuburikidza neApple Watch
Apple inoenderera nekuwedzera huwandu hwemabhangi uye masangano echikwereti muUnited States
Kupenga kweApple Premium Reseller kunodonhedza nzvimbo yekutengesa